Iphepha elimhlophe le-acrylic abavelisi kunye nababoneleli - China iphepha elimhlophe leacrylic sheet
Iphepha le-acrylic lilahle iphepha le-acrylic kunye nephepha le-acrylic elikhutshiwe.
Shicilela iphepha le-acrylic: ubunzima obuphezulu beemolekyuli, ukuqina okugqwesileyo, amandla kunye nokumelana okuhle kweekhemikhali. Olu hlobo lwepleyiti luphawulwa ngokuqhubekeka kwebhetshi encinci, ukuguquguquka okungenakuthelekiswa nanto kwinkqubo yombala kunye nomphumo wobume bomphezulu, kunye nokugqitywa kwemveliso, kulungele iinjongo ezahlukeneyo.
Ilitye le-Acrylic Sheet lilungile kwizicelo ezifuna ubuhle kunye nokucaca kwe-acrylic apho imveliso yesiphumo ephezulu ngokwesiko iyafuneka. Igcina umbala wayo ocacileyo ocacileyo ngaphambi nasemva kokuqamba, inika izinto ezibonakalayo kunye nokubonisa ubuhle obufunekayo obulahlekileyo kunye nezinye iimpembelelo zeeplastikhi eziguqulweyo ezinikezela imbonakalo "yemizi-mveliso".
I-acrylic emhlophe ineempawu ezininzi ezixhamlayo ezenza ukuba ibe yeyona nto ibalaseleyo kuluhlu olubanzi lweemveliso. Iibhodi zokukhanyisa, ukukhanya, i-aquarium, i-shades, kunye nezinye iimveliso zefenitshala zisebenzisa i-acrylic emhlophe ukufezekisa ukuqaqamba nokuhomba okuhle okutsala umthengi.
Iphepha le-Acrylic libizwa ngokuba yi-PMMA sheet, i-Plexiglass okanye i-Organic sheet yeglasi. Igama leMichiza yiPolymethyl methacrylate. I-acrylic ibambe iipropathi ezibonakalayo phakathi kweeplastikhi ngenxa yokuqaqamba okungaginyisi mathe kwaye okucacileyo okufana nekristale, kuyadunyiswa njengo "Queen of Plastics" kwaye kuyonwabisa kakhulu ngabaqhubekekisi.
Igama elithi "acrylic" lisetyenziselwa iimveliso eziqulathe into evela kwi-acrylic acid okanye into ehambelana nayo. Rhoqo, isetyenziselwa ukuchaza iplastiki ecacileyo, efana neglasi eyaziwa ngokuba yi-poly (methyl) methacrylate (PMMA). I-PMMA, ekwabizwa ngokuba yiglasi ye-acrylic, ineempawu ezenza ukuba kube lukhetho olungcono kwiimveliso ezininzi ezinokuthi zenziwe ngeglasi.
1.enye iplc acrylic sheetpacking:
igqunywe ngephepha lobugcisa okanye ifilimu ye-PE kumacala amabini, ifilimu egutyungelweyo ngaphandle kophawu lwethu lokudibana.
2.kunye pallet Bulk impahla ivale:
Iitoni ezi-2 kwipallet nganye, sebenzisa iipelethi zomthi kunye neepelethi zentsimbi ezantsi,
ngokupakishwa kweefilimu zefilimu macala onke ukuqinisekisa ukhuseleko kwezothutho.
3.Isiqulatho esipheleleyo sokupakisha umthwalo:
Iitoni ezingama-20-23 (malunga ne-3000pcs) yesikhongozeli seenyawo ezingama-20 esine-10 -12pallets.
Iphepha elimhlophe le-acrylic ngumbala wephepha le-acrylic. I-acrylic, eyaziwa ngokuba yi-plexiglass yonyango ekhethekileyo. Uphando kunye nophuhliso lwe-acrylic lunembali engaphezu kwekhulu leminyaka. I-polymerizability ye-acrylic acid yafunyanwa ngo-1872; i-polymerizability ye-methacrylic acid yaziwa ngo-1880; indlela yokuhlanganisa ye-propylene polypropionate yagqitywa ngo-1901; le ndlela ikhankanywe ngentla yasetyenziswa ukuzama ukuvelisa imveliso ngo-1927; Umzi mveliso we-methacrylate wawungo-1937 Uphuhliso lokuvelisa luyimpumelelo, ke oko kungena kwimveliso enkulu. Ngexesha leMfazwe yesibini (II) yeHlabathi, ngenxa yobulukhuni bayo obugqwesileyo kunye nokuhanjiswa kokukhanya, i-acrylic yayiqale isetyenziswe kwifestile yenqwelomoya nakwibala lesipili sokubona kwikhabhathi yomqhubi wetanki. Ukuzalwa kwebhafu yokuqala ye-acrylic kwihlabathi ngo-1948 kwaphawula into ebalulekileyo kwisicelo se-acrylic.